Ukuzivocavoca kunye noQeqeshi-Vondt.net
Oovimba boLondolozo lweSigaba: Ukuzivocavoca kunye noQeqeshi
Imithambo emi-6 yalabo abanesifo seFibromyalgia
12 / 09 / 2017 /0 Amazwana/i udinwe, Intlungu engapheliyo, Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo esibangela ukuba kube nzima ukubakho kwentlungu kunye nokunyuka kokuziva kwiimvakalelo kunye nezihlunu.
Imeko inokwenza uqeqesho oluqhelekileyo lube nzima kakhulu kwaye ngamanye amaxesha luphantse lungenzeki - ke ngoko siye sahlanganisa inkqubo yoqeqesho ebandakanya imithambo emi-6 ethambileyo elungiselelwe abo udinwe. Ngethemba ukuba oku kunokubonelela ngesiqabu kwaye kukunceda ukukunika ubomi obungcono bemihla ngemihla. Sikwacebisa uqeqesho kwichibi lamanzi ashushu ukuba unalo ithuba lokwenjenjalo.
BONUS: Skrolela ezantsi ukuze ubone ividiyo yokuzivocavoca enemithambo eyenzelwe abo bane-fibromyalgia, kwaye ufunde ngakumbi malunga neendlela zokuphumla.
Funda: Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela kunye noFibromyalgia
IVIDIYO: Amandla ayi-6 oQeqeshi bomzimba usenzela i-Fibromyalgia
Apha ubona inkqubo yokuziqhelanisa eyenzelwe abo bane-fibromyalgia eyenziwe ngu I-chiropractor Alexander Andorff - ngokusebenzisana nomzimba we-physiotherapist kunye neqela lakhe le-rheumatism. Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ubone imithambo.
I-VIDEO: Ukuzivocavoca oku-5 ngokuchasene neMisipha yokuHamba kweMva
I-Fibromyalgia ibandakanya ukwanda kweziganeko zentlungu yemisipha kunye nokuxinana kwemisipha. Apha ngezantsi kukho imisebenzi emihlanu enokukunceda ukhulule izihlunu ezixineneyo kunye nobunzima.
Ngaba uzithandile iividiyo? Ukuba uyonwabele, siyakuxabisa kakhulu ukuba ubhalisele ijelo lethu likaYouTube kwaye usinike ubhontsi kumajelo eendaba ezentlalo. Kuthetha lukhulu kuthi. Umbulelo omkhulu!
Ngokudibeneyo kumlo ochasene neNhlungu eziNgapheliyo
Sixhasa wonke umntu onentlungu engapheliyo kumzabalazo wabo kwaye siyathemba ukuba uyawuxhasa umsebenzi wethu ngokuthanda indawo yethu Facebook kwaye urhumele kwikhitshini yethu yevidiyo kwi YouTube. Sikwafuna ukukhomba malunga neqela lenkxaso I-Rheumatism kunye neNhlungu eziNgapheliyo - INorway: Uphando kunye neendaba -eyiqela lamahhala le-Facebook kulabo abaneentlungu ezingapheliyo apho uyazi ulwazi kunye neempendulo.
Kufuneka kugxilwe ngakumbi kuphando olujolise kwimeko echaphazela abaninzi - yiyo loo nto sikucela ngobubele ukuba wabelane ngeli nqaku kumajelo asekuhlaleni, ngokungcono ngokusebenzisa iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi, "Ewe kuphando oluninzi malunga nefibromyalgia". Ngale ndlela umntu unokwenza ukuba 'isifo esingabonakaliyo' sibonakale ngakumbi.
Ukuziqhelanisa noKwenza umthambo ngokuBhetyebhetye
Kubalulekile ukuba uyazi imida yayo ukunqanda "ukuqhuma" kunye nokonakala. Ke ngoko, kungcono ukuzama uqeqesho olunamandla asezantsi kunokuthatha "i-skipper's grip", njengoko le yokugqibela inokuthi, ukuba yenziwe ngokungalunganga, ibeke umzimba kukungalingani kwaye ibangele iintlungu ezingakumbi.
Funda: Iimpawu ezi-7 ezaziwa ngokuba zii-Aggravate Fibromyalgia
Cofa kumfanekiso apha ngasentla ukuze ufunde inqaku.
1. Ukuphumla: Iindlela zokuphefumla kunye ne-Acupressure
Ukuphefumla sisixhobo esibalulekileyo kumlo wokulwa nokudibana kwezihlunu kunye nentlungu edibeneyo. Ngokuphefumla okufanelekileyo, oku kunokubangela ukwanda okuguqukayo kwibhambo kunye nokuqhotyoshelwa kwemisipha okunxulumene nokukhokelela ekunciphiseni koxinzelelo kwimisipha.
Umgaqo ophambili wento ethathwa njengeyona ndlela yokuqala yokuphefumlela nzulu kukuphefumlela ngaphakathi nangaphandle amaxesha ama-5 ngomzuzu omnye.. Indlela yokufezekisa oku kukuphefumla ngokunzulu kwaye ubale ukuya kwi-5, ngaphambi kokuphefumla kakhulu kunye nokubala kwakhona ukuya kwi-5.
I-Therapist emva kobu buchule ifumene ukuba oku kunesiphumo esifanelekileyo sokwahluka kwenqanaba lentliziyo ngokunxulumene nento yokuba isetelwe kwisantya esiphakamileyo kwaye ke ikulungele ngakumbi ukulwa ukuphendula koxinzelelo.
Enye indlela yokuphefumla eyaziwayo kukuphefumla ngokuchasene nokuxhathisa. Oku kufuneka kwenze umzimba ukhululeke kwaye ungene kwindawo ekhululekile. Indlela yokuphefumla yenziwa ngokuphefumla ngokunzulu kwaye emva koko uphume ngomlomo ovaliweyo - ukuze imilebe ingabi nomgama omkhulu kwaye kufuneka 'utyhale' umoya ngokuchasene nokuxhathisa.
Eyona ndlela ilula yokwenza 'ukuphefumla ukuphefumla' kukuphefumla ngaphakathi nasemlonyeni.
Ukuphumla nge-Acupressure Mat
Umlinganiselo ofanelekileyo wokuzilinganisa ukuzola ukuxinezeleka kwezihlunu emzimbeni unokusetyenziswa yonke imihla mat acupressure (bona umzekelo apha - ikhonkco livula kwiwindow entsha). Sincoma ukuba uqale ngeeseshini ezimalunga nemizuzu eyi-15 kwaye emva koko usebenze indlela yakho ukuya kwiiseshoni ezinde njengoko umzimba usiba nonyamezelo lwamanqaku okuphulula. Cofa apha ukufunda ngakumbi malunga ne-relaxation mat. Yintoni eyongezelelweyo emnandi malunga nale ntlukwano esiyidibanisayo kukuba iza nenxalenye yentamo eyenza kube lula ukusebenzela izihlunu eziqinileyo entanyeni.
2. Ukufudumeza kunye nokuzithoba
Ukuqina okuhlangeneyo kunye neentlungu zemisipha zihlala ziyingxenye yobomi bemihla ngemihla kwabo bachaphazelekayo yi-fibromyalgia. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukugcina umzimba uhamba ngokuzolula rhoqo kunye nokuhamba okulula imini yonke Ukolula rhoqo kunokubangela ukuba amalungu ahambe ngokulula kwaye igazi ligeleze izihlunu eziqinileyo.
Oku kuyinyani ikakhulu kumaqela amakhulu emisipha njenge-hamstrings, izihlunu zomlenze, izihlunu zesitulo, umva, intamo kunye namagxa. Kutheni ungazami ukuqala usuku ngeseshini yokulula ekhanyayo ejolise kumaqela amakhulu emisipha?
3. Ukuzivocavoca ngokuKwaziyoyo koLwazi lokubuyela umva kunye nentamo
Lo msebenzi wolula kwaye uqokelele umqolo ngendlela ethambileyo.
Ukuzolula: Emva koko thoba iimpundu zakho kwizithende zakho -ukuhamba kwezolile. Khumbula ukugcina ijika elingathathi hlangothi kumqolo. Bamba umkhanyo malunga nemizuzwana engama-30. Zizambatho kuphela ezibuyela umva njengoko ukhululekile.
Phinda umthambo ka-4-5 amaxesha. Ukuzivocavoca kunokwenziwa ngamaxesha angama-3-4 ngosuku ukuba kuyimfuneko.
4. Uqeqesho lwamanzi okushushu
Uninzi lwabantu abane-fibromyalgia kunye nokuphazamiseka kwesifo se-rheumatic baxhamla kuqeqesho kwichibi lamanzi ashushu.
Uninzi lwabantu abane-fibromyalgia, i-rheumatism kunye neentlungu ezingapheliyo baye bazi ukuba ukwenza umthambo emanzini ashushu kunokuba mnene-kwaye kunika ingqalelo ngakumbi kumalungu aqinile kunye nezihlunu ezibuhlungu.
Sinoluvo lokuba uqeqesho lwamachibi ashushu kufuneka lube yindawo ekugxilwe kuyo kuthintelo kunye nonyango lwezihlunu zexesha elide kunye nezigulo ezidibeneyo. Ngelishwa, inyani yeyokuba ukubonelelwa okunje kuhlala kuvalwa ngenxa yokunqongophala koomasipala. Sinethemba lokuba le meko ibuyela umva kwaye iphinde ijolise ngakumbi kule ndlela yoqeqesho.
5. Imithambo yeengubo eziThobekileyo noQeqeshiso loQeqko (ngeVIDO)
Nalu ukhetho lweendlela zokuzivocavoca ezilungiselelwe abo bane-fibromyalgia, olunye uxilongo lwentlungu engapheliyo kunye nokuphazamiseka kwe-rheumatic. Siyathemba ukuba uzifumana ziluncedo -kwaye nawe ukhethe ukwabelana ngayo (okanye inqaku) nabantu obaziyo kunye nabahlobo abanesifo esifana nesakho.
IVIDIYO - Uqheliso lwe-7 lweeRheumatists
Aqali ividiyo xa uyicofa? Zama ukuhlaziya ibrawuza yakho okanye yibukele ngokuthe ngqo kwisitishi sethu seYouTube. Kwakhona khumbula ukubhalisela kwisiteshi ukuba ufuna iinkqubo ezilungileyo zoqeqesho kunye nokuzilolonga.
Uninzi lwe-fibromyalgia ngamanye amaxesha luyaphazamiseka ubuhlungu sciatica kunye nemitha ukuya emilenzeni. Ukwenza umthambo wolula kunye noqeqesho lokuzivocavoca njengoko kuboniswe ngezantsi ngokuhambisa okulula kunokukhokelela ekuqhubekeni kwemicu yemisipha kunye nokuxinana kwemisipha - ezinokuthi emva koko zibangele i-sciatica encinci. Kuyacetyiswa ukuba wolule imizuzwana engama-30-60 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
IVIDOYO: Iingubo ezi-4 zokuVavanya imiqondiso yePiriformis Syndrome
6. Yoga kunye nengqondo
I-Yoga inokuba yithambiso kuthi ngefibromyalgia.
Ngamanye amaxesha iintlungu zinokuba nkulu kwaye ke kunokuba luncedo ukusebenzisa umthambo we-yoga othambileyo, iindlela zokuphefumla kunye nokucamngca ukuze uphinde ukwazi ukulawula. Abaninzi badibanisa i-yoga kunye mat acupressure.
Ngokuziqhelanisa neyoga ngokudibana nokucamngca, ungafezekisa kancinci ukuzeyisa kunye nokuzinxwema kwintlungu xa zikwimeko emaxongo. Iqela le-yoga linokuba lilungile ngokunxulumene nentlalo, kwaye kunokuba yindawo yokudlulisela ingcebiso kunye namava ngeendlela ezahlukeneyo zonyango kunye nokuzivocavoca.
Nazi ezinye iindlela ezahlukeneyo zeyoga ezinokuzanywa (amakhonkco avulekileyo kwifestile entsha):
- I-5 yeYoga yokuzivocavoca kubuhlungu beHip
- Ukuzivocavoca kwe-5 ye-Yoga kubuhlungu be-Back
- I-5 yeYoga yokuzivocavoca ngokuchasene nentambo eqinileyo
Kunconywe ukuNcedisa kwakho kwiRheumatism kunye nePain engapheliyo
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (iingxelo ezininzi zokuphucula ukusetyenziswa)
Isishwankathelo: Ukuzivocavoca kunye neeTekhnoloji zokuPhumla kwabo baneFibromyalgia
I-Fibromyalgia inokuba yingxaki kakhulu kwaye ibe yinto embi kubomi bemihla ngemihla.
Ke ngoko, kubalulekile ukuba wazi imithambo elulamileyo ekwalungele abo banolwazelelelo oluphezulu kwezihlunu nakumalungu. Wonke umntu ucetyiswa ukuba ajoyine iqela lenkxaso le-Facebook mahala I-Rheumatism kunye neNhlungu eziNgapheliyo - INorway: Uphando kunye neendaba apho unokuthetha nabantu abanengcinga-efanayo, hlala ubukele iindaba malunga nesi sihloko kunye nokutshintshiselana ngamava.
Kwakhona, singathanda ukukucela ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngeblogi yakho (zive ukhululekile ukudibanisa ngqo kwinqaku). Ukuqonda kunye nokugxila okwandisiweyo linyathelo lokuqala eliya kubomi obungcono bemihla ngemihla kulabo abane-fibromyalgia.
Iingcebiso malunga nendlela yokuNceda
Ukhetho C: Landela kwaye ulingane Iphepha lethu le-Facebook (Cofa apha ukuba uyafuna)
Sinikezela ngovavanyo lwangoku, unyango kunye nokuvuselelwa kwintlungu engapheliyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:07Imithambo emi-6 yalabo abanesifo seFibromyalgia
6 yoga ubonisa ukuba Ntshikilelo
16 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo, Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca/av ubuhlungu
Unengcinezelo enkulu? Nazi izinto ezi-6 zeYoga Exercise ezinokukunceda uphumle kwaye unciphise uxinzelelo lomisipha. Zive ukhululekile ukuba wabelane nomntu ngoxinzelelo.
Ukuzivocavoca ngeYoga kunye neyoga kunokuba luncedo xa kuziwa ekuphumleni nasekuhlaziyweni kubomi bemihla ngemihla obushushu. Ukolula rhoqo kunye nokuhamba kunokuba yinto elungileyo yokulwa izihlunu ezixineneyo kunye namalungu aqinileyo. Zama ukubekela bucala imizuzu engama-20 ukuya kwengama-40 ngosuku ngalunye, uya kuba nakho ukubona inkqubela phambili enkulu.
Le yokuma yoga ukhupha uvalo kwaye ikuvumela ukuba ziphefumla isisu sakho. Bagxile Ukuthanjiswa kwaye uphefumla nzulu kunye isisu sakho. Thatha umoya impumlo yakho uze uphume umphefumlo kancinane ngomlomo wakho. Phinda phezu 30-40 Ukuphefumla.
2. UAnanda Balasana
Indawo yokuphumla yeyoga eyonyusa ukuhamba esinqeni nakwisihlalo. Isolula kwaye inika ubhetyebhetye ngakumbi ngakumbi kumqolo osezantsi. Fumana isikhundla apho solula ngokulula kwaye ubambe imizuzwana engama-30 ngaphambi kokuphinda ngaphezulu kweeseti ezi-3-4.
Indawo yeyoga apho unokukhulula khona uxinzelelo kunye noxinzelelo. Oku kolula umva wonke ukusuka kwinxalenye esezantsi yonke indlela ukuya kutshintsho entanyeni- izihlunu esaziyo sonke kunokuba nzima ukuzolula ngendlela elungileyo. Isolula kwaye inika ubhetyebhetye ngakumbi kokubini asezantsi nangaphezulu. Yima emadolweni uyeke umzimba wakho uwele phambili ngeengalo ezoluliweyo njengoko kubonisiwe emfanekisweni - qiniseka ukuba uyakwenza oku ngokunyakaza okuzolileyo, okuzolileyo. Fumana isikhundla apho solula ngokulula kwaye ubambe imizuzwana engama-30 ngaphambi kokuphinda ngaphezulu kweeseti ezi-3-4.
4. «5-ubuchule» (Ubuchule bokuphefumla ngokunzulu)
Umgaqo ophambili wendlela yokuqala yokuphefumla ngokunzulu kukuphefumla nokuphuma amaxesha ama-5 ngomzuzu omnye. Indlela yokuphumeza oku kukuthatha umoya kwaye ubale ukuya ku-5, ngaphambi kokukhupha umoya kakhulu kwaye uphinde ubale ukuya ku-5. kungoko ukulungele ngakumbi ukulwa iimpendulo zoxinzelelo. Obu buchule bokuphefumla bunokudityaniswa nendawo yeyoga Sukhusana.
Umthambo osebenzayo okhupha uxinzelelo entanyeni nasemagxeni. Yima kuzo zone iinyawo emva koko uphakamise isihlalo kancinci ukuya eluphahleni - ude ufike kwindawo ebonisiweyo. Bamba indawo malunga nemizuzwana engama-30-60 (okanye ixesha elide kangangoko unako) kwaye emva koko uzithobe kancinci emhlabeni kwakhona. Ukuzivocavoca kusebenze izakhiwo ezifanelekileyo kunye nezihlunu ezijikeleze amagxa ngendlela efanelekileyo. Phinda ngaphezulu kweeseti ezi-4-5.
Le yimithambo efanelekileyo yeyoga ekufuneka ikhethwe yonke imihla ukuze isiphumo siphezulu- kodwa siyazi ukuba iintsuku eziphakathi evekini azisoloko zikuvumela oku, ke sicinga ukuba ulungile nokuba ungazenza yonke imihla.
Konke kuxhomekeke kuwe. Fumanisa ukuba yintoni esebenzayo kuwe ekuqaleni kwaye wakhe kancinci kodwa ngokuqinisekileyo uye phambili. Oku kunokuba yinkqubo echitha ixesha kodwa inomvuzo kakhulu. Ukuba unesifo, sicela ukuba ubuze ugqirha wakho ukuba ngaba le mithambo ingaba luncedo kuwe- unokuzama ngononophelo olukhulu. Ngenye indlela sikukhuthaza ukuba uhambe kwaye uhambe uhambo olumqengqelezi ukuba kunokwenzeka.
Sibanye inkonzo yasimahla apho u-Ola noKari Nordmann banokufumana iimpendulo kwimibuzo yabo inkonzo yethu yasimahla yokubuza malunga neengxaki zempilo musculoskeletal - engaziwa ngokupheleleyo ukuba bafuna njalo. Amakhulu sele efumene uncedo-ke ulinde ntoni? Nxibelelana nathi ngaphandle kwesibophelelo namhlanje!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:366 yoga ubonisa ukuba Ntshikilelo
Iphepha loku-1 lama-34123>»